Saturday September 06, 2008 - 21:52:54 in Maqaallo by Xarunta Dhexe
Tan iyo Horaanti Bisha inasoo dhaaftay waxa Gayiga Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika la isla dhax maray sheeko Yaab leh taa oo aheed Gabar Da’yar ee Soomaaliyeed oo wiil udhashay mid ka mid ah Askari ka tirsan Ciidamada Dowlada Yugaandha
Tan iyo Horaanti Bisha inasoo dhaaftay waxa Gayiga Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika la isla dhax maray sheeko Yaab leh taa oo aheed Gabar Da’yar ee Soomaaliyeed oo wiil udhashay mid ka mid ah Askari ka tirsan Ciidamada Dowlada Yugaandha ee Jooga Soomaaliya.
Gabadhaan Soomaaliyeed ee magaceeda lagu sheegay Nino Cumar Ibraahim ayaa warbaahinta qaar sida wargeysyada kasoo baxa dalka yugaandha waxa ay ufaafiyeen qisada ku dhacdo Gabdhaan si ka gedisan sida xaqiiqda tahay taas oo ay cadeesay gabadha Soomaliyeed ee Da’da yar misana udhaxday Askarigan yugaandha ee ka tirsan Ciidamada Amisom ee Soomaaliya gaar ahaan kuwooda Qeybta Caafimadka.
Niino oo uwarameesay Idaacada Hornafrik ee Magaalada Muqdisho ayaa marki horeba waxa ay sharaxaad kabixisay sida ay uqabsatay Qisadaan yaabka leh iyadoo dhankakalena durba hadalkeedi ku bilaawday in ayba la yaabtay sida ay uturjumeen qaar ka mid ah saxaafada gudaha iyo dibada iyadoo sheegtay in aysan aqoonin qoraalka ay kusoo baxeen wargeesyadaan balse loo sharxay maqaalada ay uga hadlayeen gabadhaan balse ay qirtay wax ay run ka sheegeen kaliya in ay eheed da’deeda .
Nino ayaa hadalkeedi ku bilaawday “ Waxa Xanuunsanaa Aabaheega Sheekh Cumar Ibraahim kaasi oo marki danbe la dhigay Isbitaalka Ciidamada Yugaandha ay ku leeyihiin Magaalada Muqdisho taa oo marki la geeyay aan aniga aabaheega ka saacidi jiray Dhanka Adeega daruuriga ah balse aan awoodin tasiilaadka kale taa oo jaanis usiiyay Mid ka mid ah takhaatiirta Yugaandheeska isla markaana turjubaan soomaali oo igu qal qaaliyay arinkaan iyadoo la iiga faa’iideestay daruufta dhaqaale ee na heesato iyo xanuunka aabaheega heesto oo aan waxba ka qaban Karin”
Niino ayaa sidoo kale waxa wax laga weydiiyay diinta ay isku guursadeen Askarigaani magaciisa lagu sheegay Joshua Aziza ayeey waxa ay ku jawaabtay “ Dhowr mar oo aan magaciisa ka shakiyayba balse Turjubaanka Soomaali ayaa mar waliba iigu sheegi jiray in uu yahay Muslim isla markaana uu doonayo in uu ku guursado shareecada islaamka si oo aabaheed usaacido intaa kadib turjubaanki ayaa keenay sadex nin uu ku sheegay wadaado sameeyana wax ay ku sheegeen nikaax” ayeey markale tiri ,
Nino ayaa sidoo kale waxa ay muujisay inta ay ka hadleesay idaacadaan qiirada iyo uur kutaalada ay dareemeeso taa oo sidoo kale ay qirtay in uuba geeriyooday aabaha ay rafaadkaan iyo dibinta ugu dhacday baxnaanadiisa laakin qadar eebo ee tahay ayeey waxa ay su’aal kadis ah weydiisay wariyihi wareesanaayay iyadoo dhahday wariye adiga sidee ii aragtaa ma qof qaldan mise ?
Wariyihii ayaa ku jawaabay waxa kuu arkaa qof aan danbi laheen balse la qalday taa oo ay qabaan soomaali badan oo dhageesaneesay qisada sida ay uga sheekeesay gabdha ay qaateen fakir ka gedisan midki marka hore ay ka qabeen taa oo ay usabab eheed sida ay uturjumeen saxaafada Reer Yugaandha .
Hadaba Niino ayaa mudo waxa ay kusugneed sida ay sheegtay Saldhiga Ciidamada Yugaandha ee Magaalada Muqdisho kadib marki ay ka baqday in ay dharbaaxo kaga timaado kooxaha dirirta ka wada Magaalada Muqdisho taa oo ay sheegtayba in gurigeeda la weeraray isla markaana lagu dilay gabar la dhalatay balse sida la sheegay lagu qalday iyada .
Sidoo kale Niino ayaa iminka ku sugan Gudaha Wadanka Yugaandha si ay xaqeeda iyo maxkamad ay ula hor tagto wadanka Yugaandha taa oo ay usuura galiyeen qaar kamid ah saraakiisha Ciidamada Yugaandha ee ku sugan gudaha wadanka Soomaaliya.
Niino ayaa ka warbixisay waxa ay kala kulantay gudaha wadanka Yugaandha iyo in ay aragtay ninki ay xaqa ku tabeesay “ runtii waan arkay isaga waxana usheegay in uu iqayaanay oo kirishtaan ahaa isla markaana been ii sheegay anigana aan ka hareenin ilaa maxkamad heer caalami ayeey tiri wallow oo iga codsaday in aan cafiyo maadaama uu yahay Bani aadam” ayeey iyadoo qushuucsan markale tiri .
Niino ayaa sidoo kale waxa ay la kulantay afhayeenka ciidamada Uganda Paddy Akunda isagoo afhayeenka ka raali geliyay gabadhaan yar qaladka laga galay isla markaana ubalan qaaday in la siin doono dhamaan xuquuqda ee leedahay sidoo kale waxa arinka gabadhaan ugurmaday jaaliyada Soomaaliyeed ee Dalka Yugaandha .
Hadaba Aqristow inkastoo gabadha ay eheed gabar da’yar misana kazoo jeeday qoys aad uliito ayaa waxa ay ku dhacday dabin ay umaleegeen xataa rag soomaaliyeed taa oo ay ugu gambadeen Daruufta heesato iyo Xanuunka aabeheed haayay taa oo ay uga badasheen Xubinamadeedi ugu muhiimsaneed nolosheeda iyadoo sidoo kalena ku dhiira geliyay in uu yahay Askarigaani Islaam diinteedana waxba udhimeen.
Isha Wararka Hornafrik Radio Muqdisho